Ciidamada Itoobiya oo laga riixay deegaanno katirsan ismaamulka Amhara.
Wednesday September 15, 2021 - 17:13:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa melleeteriga Itoobiya lagu gaarsiiyay dagaalka culus ee ka holcaya galbeedka wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka qowmiyaadda Tigreega ay horumarro ballaaran ka sameynayaan jiidda dagaalka gobolka Amhara.
Wakaaladaha wararka reergalbeedka ayaa soo wariyay in cutubyo katirsan melleteriga Itoobiya laga riixay dhowr deegaan oo katirsan gobolka Gonder.
Madaxweynaha ismaamulka Amhara ayaa soo saaray baaq hor leh oo faraya maamulayaasha gobollada in ay qafaalaan dhammaan dhalinyarada gaashaan qaadka ah.
Kumanaan qof oo ubadan rag ayaa la sheegay in laga raafay Gonder iyo hareeraheeda, sarkaal uhadlay jabhadda TPLF ayaa sheegay in ay kusii siqayaan Gonder si ay magaalada uga qabsadaan wax uu ugu yeeray sharwadayaasha Amxaarada.
Dhinaca kale muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada Tigreega oo dib uqabsaday Gantaallada S75 iyo Saam7 oo bishii Novembar ee lasoo dhaafay uu Melleteriga Abiy oo ka daabulay duleedka magaalada Maqalla.
Sawaariikhdan ridada fog ayaa lageeyay gobolka Amhara balse Tigreega ayaa xaqiijiyay in ay dib uqabsadeen, wararka ayaa intaas ku daraya in melleteriga Itoobiya si xun loogu dhiig bixiyay hardanka ka socda gobollada Cafarta iyo Amaxaarada.
Ciidamada maamulka 'Galmudug' oo dagaal culus uga jira Guriceel.